सही सूचना गलत सूचना - परिहास - नेपाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएछ, ‘मकहाँ सही सूचना नै पुग्दैनन् । सहीभन्दा गलत सूचना बढी पुग्छन्, जसले गर्दा निर्णय पनि गलत हुन जान्छन् ।’
उहाँले यसो भन्दा मनमा चसक्क प्रश्न उठ्यो– आखिर प्रधानमन्त्रीज्यूककहाँ सही सूचना किन पुग्दैनन् ? उहाँसम्म सही सूचना नपुग्नुको कारण के होला ?
त्यही साँझ म पुगेँ, सही सूचनाको घर । आफू पनि सूचनामै काम गर्ने मान्छे । त्यसैले सबै सूचनाको डेराहरूबारे मलाई सूचना थियो । कोठामा सही सूचना आराम गरिरहेको थियो । यसैबाट थाहा हुन्छ, उनी फुर्सदमा छन् (वास्तवमा भ्याई–नभ्याई हुने त गलत सूचनालाई मात्रै हो कि क्या हो ?)
मेरो पहिलो प्रश्न नै त्यही थियो, ‘क्या हो, अचेल तिमी प्रधानमन्त्रीकहाँ जाँदैनौ कि कसो ? प्रधानमन्त्रीज्यू त सही सूचनै आउँदैनन् भन्नुहुन्छ त ।’
सही सूचनाले खुइरय सास ताने । निधारमा हैरानीका रेखाहरू देखिए । भने, ‘नगा’ को कहाँ हो र ! तर हामीलाई प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न साह्रै गाह्रो छ ।’
‘किन ? त्यसो त हुनु नपर्ने ।’ मैले भनेँ ।
‘हुनु नपर्ने हो । तर भइदिन्छ,’ उनले कथा सुरु गरे, ‘सबैभन्दा पहिले त बालुवाटारको गेटमै हाम्रो पूरा तलासी लिइन्छ । त्यही गेटबाट गलत सूचनाहरू खुरुखुरु भित्र–बाहिर गरिरहेको हामी देखिरहेका हुन्छौँ । गलत सूचनाहरू हेर्दा सुकिलामुकिला पनि हुन्छन् । उनीहरूलाई समस्या छैन । हामी त यस्तै हौँ । गेटमै पूरा सोधनी हुन्छ । सही सूचना हो भन्ने प्रमाण के छ भनेर सोधिन्छ । भित्र छिर्नै गाह्रो हुन्छ । कतिपटक त म गेटबाटै फर्काइएको समेत छु । अनि कसरी जाने त्यस्तो ठाउँमा ?’
सही सूचनाको अनुहारमा पुनः लोडसेडिङ लागेको देखियो ।